नेपाल बिरुद्द युएइ - नेपालले खेल १४ रनले जितेको छ ! -
http://gp-autos.com/wp/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/db.php Leading Sports Portal in Nepal
where to order prednisone online नेपालले खेल १४ रनले जितेको छ !
ललितनारायण राजवंशीले लगातार दोस्रो विकेट लिनेक्रममा अमिर हायतलाई १ रनमा आउट गरेका छन् । युएईको आठौं विकेट झरेको छ ।
१०५ रनको लक्ष्य लिएर आएको युएईले ९ ओभरमा ६ विकेट गुमाई ८५ रन बनाएको छ, अन्तिम ओभरमा टोलीलाई विजयका निम्ति २० रनको आवश्यक्ता ।
अविनाश बोहरालाई दोस्रो सफलता । उनले मोहम्मद बुटालाई ११ रनमा आउट गरी नेपाललाई छैटौं सफलता दिलाएका छन् ।
करण केसीले युएईका कप्तान मोहम्मद नावेदलाई शुन्यमा आउट गरेका छन् । नेपाललाई पाँचौं सफलता ।
नेपाललाई चौथो सफलता । करण केसीले साइमन अनवरलाई ३० रनमा आउट गरेका छन् ।
१०५ रनको लक्ष्य लिएर आएको युएईले ७ ओभरमा ३ विकेट गुमाई ७२ रन बनाएको छ ।
युएईले ६ ओभरमा ३ विकेट गुमाई ६१ रन बनाएको छ, नेपालले छाडेको लक्ष्य १०५ रन ।
सन्दीप लामिछानेले मोहम्मद उस्मानलाई आउट गरी नेपाललाई तेस्रो सफलता दिलाएका छन् ।
युएईले ५ ओभरमा २ विकेट गुमाई ५८ रन बनाएको छ, नेपालले छाडेको लक्ष्य १०५ रन ।
अविनाश बोहराले घुलाम सब्बरलाई २५ रनमा बोल्ड गरी नेपाललाई दोस्रो सफलता दिलाएका छन् ।
युएईले ४ ओभरमा १ विकेट गुमाई ५१ रन बनाएको छ, नेपालले छाडेको लक्ष्य १०५ रन ।
युएईले ३ ओभरको समाप्तीमा १ विकेट गुमाई ३९ रन बनाएको छ ।
नेपाललाई पहिलो सफलता । सोमपाल कामीले अस्फाक अहमदलाई ८ रनमा आउट गरे । २ ओभरमा युएईको १ विकेट गुमाई २९ रन ।
सन्दीप लामिछानेको पहिलो ओभरमा युएईले २० रन जोडेको छ ।
सन्दीप लामिछानेको पहिलो दुई बलमा घुलाम सब्बरले क्रमश छक्का र २ चौका प्रहार गरेका छन्
नेपालले निर्धारित १० ओभरमा ८ विकेट गुमाई १०४ रन बनाएको छ, युएईलाई १०५ रनको लक्ष्य ।
विनोद भण्डारी १३ बलमा २१ रन बनाई आउट भएका छन् । नेपालको सातौं विकेट झरेको छ ।
करण केसी ५ बलमा १० रन बनाई आउट भएका छन् । ३ बल खेल्न बाँकी हुदा नेपालको ६ विकेट गुमाई १०२ रन छ ।
नेपालले ९ ओभरमा ५ विकेट गुमाई ९४ रन बनाएको छ । विनोद भण्डारी १९ र करण केसी २ रन बनाएर खेलिरहेका छन् । इनिङ्सको अन्तिम ओभरको खेल हुदैं ।
सन्दीप जोरा ११ बलमा २८ रन बनाई मोहम्मद नावेदको बलमा बोल्ड भएका छन् ।
नेपालले पछिल्लो ओभरमा १९ रन जोडेको छ । ८ ओभरको समाप्तीमा नेपालको ४ विकेट गुमाई ८८ रन छ । सन्दीप जोरा ९ बलमा २६ र विनोद भण्डारी ९ बलमा १७ रन बनाएर खेलिरहेका छन् ।
ओभरको अन्तिम बलमा विनोद भण्डारीले छक्का प्रहार गरेका छन् । ७ ओभरमा नेपालले ४ विकेट गुमाई ६९ रन बनाएको छ ।
नेपालले ६ ओभरको समाप्तीमा ४ विकेट गुमाई ५६ रन बनाएको छ । सन्दीप जोरा ११ र विनोद भण्डारी १ रन बनाएर खेलिरहेका छन् ।
कप्तान पारस खड्का २९ रन बनाई आउट भएका छन् ।
नेपालले5ओभरको समाप्तीमा ३ विकेट गुमाई 42 रन बनाएको छ ।
नेपालले ४ ओभरको समाप्तीमा ३ विकेट गुमाई ३१ रन बनाएको छ । कप्तान पारस खड्का १० र सन्दीप जोरा ८ रन बनाई खेलिरहेका छन् ।
नेपाललाई तेस्रो झट्का । दीपेन्द्रसिंह ऐरी २ रनमा आउट भएका छन् ।
नेपालले तेस्रो ओभरमा ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ११ रनमा गुमाएको छ । यसअघि नै पवन सर्राफ शुन्यमा आउट भइसकेका थिए ।
युएईले नेपालसँगको ट्ववान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलाको तेस्रो खेलमा टस जितेर फिल्डिङ रोजेको छ । वर्षाका कारण दुबईमा हुन लागेको खेल १०–१० ओभरको बनाइएको छ ।
अहिले दुबईमा हावा हुरी सहित बर्षा भइरहेको छ । यसकारण आज नेपाल र युएइबीचको अन्तिम टि-२० क्रिकेट प्रभावित हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।